Xukumadda Sweden oo ciidamo u direysa dalka Ciraaq - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Margot Wallström (S), utrikesminister. Foto: TT
Xukumadda Sweden oo ciidamo u direysa dalka Ciraaq
Qorshaha xukumadda oo lama filaan kun noqdey xisbiyada
La daabacay tisdag 13 januari 2015 kl 10.57
Qorsho ay todobaadkan ku dhawaaqdey xukumadda Sweden oo ah in ay ciiidamo u direyso waqooyiga Ciraaq si ay u tabobaraan ciidanka Kurdiyiinta ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa ku noqdey lama filaan xisbiyada kale ee dalka. Karin Enström waa afhayeenka arrimaha dibadda ee xisbiga Moderaterna:
- Wax sharaxaad ah kamo heyno arrintaan. Sidaas daraaded intaan ka hadlin arrintan waa in aan sugaa intaan ka helayo macluumaad dheerad ah oo ku sabsan bal sidey u fakarayaan, ayey tiri.
Shirkii heerka qaran ee Folk och Försvar ee lagu qabtay todbaadkan degaanka Sälen galbeedka gobolka Dalarna ayey wasiiradda arrimaha dibadda Margot Wallström ka sheegtey in xukumadda ay qorsheyneyso sidii ay gacan ugu geysan laheyd dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ka dagaalanta waddamada Ciraaq iyo Suuriya. Sida ay sheegtey wasiiradna qorshaha ay xukumadda ay arrintan uga gacan geysnaneyso waxay la kaashatay dalka Finland. Qorshahana waxuu yahay in dagaalka lagu gacan siiiyo ciidanka Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq. Wasiiradda ayaa intaas raacisey howlgalkan taageero uu Jamalka hogaamin doono.
Afhayeenka arrimaha dibadda ee xisbiga Vänsterpartiet Stig Henriksson ayey sidoo kale lama filaan ku noqotay baaqa xukumadda. Waxuu qabaa in ay muhiim tahay in Sweden taageerto Kurdiyiinta iyo dagaalkooda ay kaga soo horjeedaan Daacish, laakiin uusan hubin dhaban ay arrintan u mareyso xukumadda yahay mid sax ah:
- Ma diidanin qorshaha xukumadda balse waxaan dooneynaa in aan marka hore u kuurgalno oo aan wax ka ogaano tafaasiisha hindisaha.
Afhayeenka Moderaterna Karin Enström ayaa iyada xataa qabta in ay muhim tahay in gacan laga geysto halkan ka dhanka ah kooxda argagaxisadaha ee Daacish:
- Waa muhim in Sweden gacan ka geysato halganka ka dhanka ah argaagxisada iyo halganka lagu joojinayo isbaahinta waxyeelada xun leh ee Daacish. Laakiin waxaan u baahannahay in aan wax badan ka ogaano qorshaha xukumadda iyo sida ay damacsan tahay, ayey.
Wasiiradda arrimaha dibadda Margot Wallström ayaa sheegtey in xukumadda ay qorsheyneyso in marka horey ay hindisahaan ka dhaadhaciso baarlaamanka dalka iyo xisbiyada ku jira.
Laakiin Per Jönsson oo ku xeeldheer arrimaah Bariga Dhaxe kana howlgala Utrikespolitiska Institutet oo ah rug ka faaloota siyaasadda arrimaha dibadda ayaa qaabo in tillaabada wasiiradda arrimaha dibadda tahay wax lalayaabo. Waayo buuyeri wax suurogal ah ma ahan in taageero toos ah la siiyo Kurdiyiinta iyada oo aan ogalaansho middas looga heysanin xukumadda Bagdad.
- kolayto waxaa la dhahi doona waxaanu taageernay ciidanka Ciraaq halgankooda ay kaga soo horjeedaan Daacish. Laakiin suutogal mahan in Sweden toos ugu dirto hub iyo lataliyaal Erbil iyo Sulaymaniyah.